Iindlela ezi-5 zokuThengisa ngokuSondeleyo ziya kuChaphazela ukuThengwa kwabaThengi | Martech Zone
Iindlela ezi-5 zokuThengisa okuSondeleyo kuya kuba nefuthe ekuThengweni kwaBathengi
NgoMvulo, Julayi 14, 2014 UChris Damron
Itekhnoloji ye-iBeacon yindlela ehamba phambili yokuthengisa kunye nokuthengisa okusekwe kufutshane. Itekhnoloji idibanisa amashishini kunye nabathengi abakufutshane ngokusebenzisa iBluetooth transmitters (beacons), ukuthumela amakhuphoni, iidemo zemveliso, unyuselo, iividiyo okanye ulwazi ngqo kwizixhobo zabo eziphathwayo.
iBeacon yitekhnoloji yakutshanje evela kwiApple, kwaye kulo nyaka ikunyaka Ingqungquthela yoMvelisi weHlabathi liphelaItekhnoloji ye-iBeacon yayiyeyona nto bekuxoxwa ngayo.
Nge-Apple ifundisa amawaka abaphuhlisi ngakumbi malunga netekhnoloji, kunye neenkampani ezinje KwiBaconStream ukunikezela usetyenziso kumashishini ukuba asebenzise itekhnoloji kunye namandla okuyifaka kwii -apps ezikhoyo, sinokulindela ukubona iBeacon ikhula ngokukhawuleza nangobuchule.
Kubathengisi, iiBeacons kwaye intengiso esekwe kufutshane bonelela ngendlela entsha ethe ngqo yokunxibelelana nabathengi, ukwandisa ulwazi lwentengiso kunye nefuthe lokuziphatha kwabathengi.
Iqhuba abantu baye kwi ukuthenga kwangoko. Zihambile iintsuku zokuthengisa ngeposi ngokuthe ngqo kunye neekhowudi zeQR. Itekhnoloji ye-iBeacon inika amashishini indlela yokunxibelelana ngokuthe ngqo nabathengi abanokubakho xa kunokwenzeka ukuba bathenge – xa bekufuphi okanye evenkileni. Amashishini angathumela izibonelelo ukurhwebesha ukuthenga okanye ukukhuthaza ukuthengwa okungaphezulu kwemiyalezo kunye neetoni.
Inika iinkampani a ngqo kubathengi. Ngokungafaniyo nezinye iindlela zentengiso, intengiso esekwe kufutshane esekwe kunika ii-brand indlela enobungane yokufumana umyalezo wazo ezandleni zabathengi babo, ngokoqobo. Ngelixa uphawu lwentengiso evenkile inokuthi idluliswe kwaye ingahoywa, ukuthumela umyalezo ngqo kwifowuni yabathengi kudala ukubandakanyeka okungcono. Ikwayindlela eyahlukileyo yokubonisa uphawu lwentengiso kunye nokwakha ubudlelwane obuqinileyo bomgangatho kunye nabathengi.
Iindawo ezininzi zokuchukumisa nomthengi wakho. Indawo enye inokuba neebhakoni ezininzi, ezahlukileyo, nganye inikezela umyalezo owahlukileyo. Oku kubonelela ngamathuba amaninzi okudibanisa nomthengi kwaye abaqhube ukuba bathathe inyathelo. Ngelixa ukunyuselwa ngeposi kuthunyelwe ngokuthe ngqo kwindlu yomthengi kunokungasetyenziswa okanye ukuqhuba ukuba bathenge into eyodwa, iibhikhoni zivumela amashishini ukuba athumele abathengi izibonelelo ezahlukeneyo ezifanelekileyo ezikhohlisa ukuthengwa. Ukuthengiswa kweebhakoni kwindawo yomthengi, ukuthumela unyuselo oluninzi kwizinto ezifanelekileyo kwiimfuno zabo, konke ngexesha langempela.
Iibhikhoni zinika amashishini uhlalutyo lwabathengi olwahlukileyo. Xa usebenzisa itekhnoloji ngokusebenzisa iapp efana neBeaconStream, amashishini anokufikelela kwixesha lokuphila kubahlalutyi kunye nokuqonda kwiindlela zokuziphatha zabathengi, ukugcwala kweenyawo, imikhwa kunye neendlela zokuziphatha ezinokubanceda baphucule ngakumbi ukuthengisa kunye neendlela zabo zokuthengisa. Inkqubo ye- kubahlalutyi inokunceda iinkampani ukufumanisa ukuba yeyiphi na inyuselo kunye namaphulo asebenzayo kwaye ibavumele ukuba bahlengahlengise kwangoko kwezi nkcukacha.
iBeacon kunye nentengiso esekwe kufutshane ayiyontetho. Abathengisi sele bewazi amandla wentengiso ehambayo, kwaye itekhnoloji ye-iBeacon lulongezo olwamkelekileyo kwisicwangciso esiliqili sentengiso. Iimpawu eziphezulu ezinje ngeMacys, i-Starbucks kunye neAmerican Airlines sele zityalile imali kuyo, kwaye zibona amandla kunye nezibonelelo zentengiso esekwe kufutshane. Ngabadlali abaphambili abatyhala itekhnoloji, kungekudala sinokulindela ukubona amanqaku ongezelelweyo, anje ngeentlawulo zeselfowuni ezikwindawo, esenza ukuba kube lula ngakumbi abathengi kunye nokuqhuba ukuthengisa ngakumbi kumashishini.
Nantsi indlela iBeaconStream esebenza ngayo
tags: i-apile ibeaconubheduyiyayiyoukuthengisa kufutshane kweBluetoothibeaconintengiso esekwe kufutshane
UChris ligosa eliyiNtloko loPhuculo lwe KwiBaconStream, usetyenziso olusekwe kufutshane olusekwe kwintengiso. I-BeaconStream inika amashishini azo zonke iintlobo kunye nobukhulu indlela elula nexabisekileyo yokuqhagamshela abathengi abakufutshane, ubathumele amatikiti, iimveliso zedemos, unyuselo, iividiyo okanye ulwazi, ngqo kwifowuni yabo.
Isalathiso seKamva leNtengiso
Ungalifumana njani inqaku lokuwina kwi-E-Commerce Game
Jul 14, 2014 ngo-11: 17 AM
Iposti enkulu Chris !! Ulwazi oluluncedo ngokwenene.. Enkosi ngokwabelana!..
Jul 16, 2014 ngo-5: 10 AM
Ndiyavuya ubonisile oku! Akukho mntu uthetha ngale nto. Andiqondi ukuba ukhona umntu ofunde izikhokelo ezitsha. Ngokombono wam uxoxe ngamanqaku amnandi malunga nentengiso esekwe kufutshane esisisithuba esimangalisayo kubathengisi be-intanethi. Enkosi kwesi sithuba esikhulu.
NgoJanuwari 15, 2015 ngo-9:49 PM
Enkosi ngeposi enkulu uChris. Kutshanje kuye kwakho i-buzz eninzi malunga nendlela ukuthengisa okukufutshane kunokuba sesona sixhobo sisebenzayo esinokunceda amashishini enze i-ROI ephezulu ngokulula. Ngapha koko, iingcaphephe zeshishini zinoluvo lokuba ukuya phambili kungcono ukuba amashishini atshatise isicwangciso sesicwangciso sokuthengisa esikufutshane kunye neemfuno kunye nezinto ezikhethwa ngabathengi bawo. Nangona kunjalo, kunye nabathengisi abaninzi bengayazi indlela yokudibanisa iibhikhoni kunye nesicwangciso sabo seselula ezinye zezi zilingo zebhakana ziye zaphoxeka. Sixoxe ngeemfihlo ezimbalwa zempumelelo yephulo lokuthengisa elikufutshane eliya kunceda abathengisi ukuba benze iphulo labo elilandelayo apha: http://blog.mobstac.com/2015/01/4-tips-to-kickstart-your-proximity-marketing-campaign/